Iindaba-Imvelaphi kunye nokusetyenziswa kweZeolite
Zeolite sisimbiwa sendalo esiveliswe luthuthu lwentaba-mlilo esiwela kumthombo wamanzi ane-alkaline kwaye siphantsi koxinzelelo kwiminyaka emininzi eyadlulayo. Le indibaniselwano yoxinzelelo ibangelaZeolite ukwenza ifom 3D I-silica-oxygen tetrahedral yesakhiwo kunye nenqatha lobusi kunye neepore. It yenye yezimbiwa ezinqabileyo ngentlawulo embi yendalo. Indibaniselwano yobume beencindi zobusi kunye nentlawuliso engafanelekanga yomnatha iyenzaZeolite ukufunxa zombini izinto ezingamanzi kunye nezihlanganisi. Umrhumo ongalunganga ulungelelaniswe neekati ezifana ne-calcium, i-magnesium, i-potassium kunye ne-sodium, kwaye ezi zitshintshi zinokutshintshwa.
Malunga neminyaka engama-250,000 eyadlulayo, kwindawo yaseRotorua / eTaupo, umsebenzi omkhulu wentaba-mlilo wavelisa uthuthu olukhulu lwentaba-mlilo. Ezi ntaba-mlilo zaye zahlanjwa zaza zakhukuliseka zamachibi, zenza ulungelelwaniso lwentlabathi ukuya kuthi ga kwiimitha ezingama-80 ubunzulu. Umsebenzi olandelayo we-thermal kumanzi ashushu ashushu (120 isidangaukubheka phezulu ngokusebenzisa le stratigraphic deposits, ukuguqula udongwe lube luthambile kunye nolungelelwaniso lwangaphakathi lokulandelelana, kungoko igama Zeolite.
Types ye Zeolite
Kukho malunga nama-40 ahlukeneyo Zeolite iintlobo, kunye nokubonakala kwazo kuxhomekeke kwiimeko ngexesha lenkqubo yokwakha. NgakuruZeolites ebekwe kwindawo yeTaupo yentaba-mlilo kumbindi weSiqithi seNyakatho yeNew Zealand ikakhulu yimordenite kunye neclinoptilolite. Indawo, ubude kunye nokuqina kokuhamba kwamanzi ashushu ekwakhiweni kumisela inqanaba lotshintsho olushushu. Iidipozithi ezikufuphi neentanda zobushushu ziguqulwe ngokupheleleyo kwaye zihlala zinamandla oomatshini, ngelixa ezo zikude zihlala zingatshintshi kakuhle kwaye zinokwaphulwa zibe ludongwe.
Workumgaqo we Zeolite
Okokuqala, umthamo we adsorption. Kwinqanaba lokwehla kwe-thermal, izinto ezinomzimba ezihlanjululwa kude nodongwe, kushiye isakhelo se-3D sealuminium kunye nesilica. Ngenxa yoqwalaselo olwahlukileyo, banentlawulo ephezulu engalunganga (umthamo wotshintshiselwano nge-cation, ihlala inkulu kune-100meq / 100g). Iikethi ezihlawuliswe ngokufanelekileyo kwisisombululo (okanye iimolekyuli ezinqunyanyisiweyo emoyeni) zinokufakwa kwi-crystal lattice, kwaye kuxhomekeke kwixabiso le-pH, uxinzelelo lwe-cation kunye neempawu zokuhlawuliswa zinokukhutshwa kamva. Le indibaniselwano yolwakhiwo lobusi kunye nentlawulo engeyiyo kumnatha ivumela iZeolite ukufunxa zombini izinto ezingamanzi kunye nezihlanganisi. Zeolite sifana nesiponji kunye nemagnethi. Zifunxe izinto ezingamanzi kwaye nitshintshise ngemixube yamagnetic, ezenza ukuba zilungele iinjongo ezahlukeneyo, ekususeni ivumba ukuya ekucoceni izinto ezinobuthi eziphuphumayo, ukunciphisa i-nitrogen kunye ne-phosphorus leachate kwiifama.
Okwesibini, amandla okutsala emzimbeni. Zeolite inendawo enkulu yangaphakathi nangaphandle engaphezulu (ukuya kuthi ga kwi-145 yeemitha zesikwere / g), enokufunxa ulwelo olungaphezulu. Xa zomile, ezinye zeziZeolite inokufunxa ukuya kuthi ga kwi-70% yesisindo sayo kwifom engamanzi. Umzekelo, kwiinkundla zemidlalo,Zeolite izakufunxa izakhamzimba ezinyibilikayo kwisichumiso esongeziweyo, ukuze ikwazi ukuhlangabezana neemfuno zezityalo kwixesha elizayo ukuze ifunxe amanzi kwaye yonyuse umthamo wokubamba amanzi ngaphandle kokuchaphazela kakubi indawo yepore kunye nokungena.